महामारीकै रूपमा फैलिएको डेंगुको संक्रमणबाट अहिलेसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको सरकारले जनाएको छ । देशभर डेंगुको प्रकोप फैलिएको र मन्त्री तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै संक्रमित भएका समाचार आइरहेका बेला सरकारले भने डेंगुकै कारण मृत्यु हुने आधिकारिक संख्या चार मात्र रहेको बताएको हो । स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले बताएअनुसार ४ जनाको मृत्यु भएको छ तर डेंगुकै कारण मृत्यु भएको हो वा होइन भनेर थप परीक्षण भइरहेको छ ।यसैगरी देशभर करिब २ हजार ६ सय बिरामीमा डेंगु संक्रमणको आशंका छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा करीब १ हजार १ सयजना छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ का ७ सय ५३, प्रदेश २ मा २३, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ७२, प्रदेश ५ मा १ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा २ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ जनामा डेंगुको संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ । यो तथ्यांक सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको मात्र हो ।
२३ भाद्र २०७६, सोमबार ११:४७
महामारीकै रूपमा फैलिएको डेंगुको संक्रमणबाट अहिलेसम्म ४ जनाको मृत्यु भएको सरकारले जनाएको छ । देशभर डेंगुको प्रकोप फैलिएको र मन्त्री तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू नै संक्रमित भएका समाचार आइरहेका बेला सरकारले भने डेंगुकै कारण मृत्यु हुने आधिकारिक संख्या चार मात्र रहेको बताएको हो । स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले बताएअनुसार ४ जनाको मृत्यु भएको छ तर डेंगुकै कारण मृत्यु भएको हो वा होइन भनेर थप परीक्षण भइरहेको छ ।
यसैगरी देशभर करिब २ हजार ६ सय बिरामीमा डेंगु संक्रमणको आशंका छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा करीब १ हजार १ सयजना छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ का ७ सय ५३, प्रदेश २ मा २३, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ७२, प्रदेश ५ मा १ सय ५, कर्णाली प्रदेशमा २ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ जनामा डेंगुको संक्रमण भएको आशंका गरिएको छ । यो तथ्यांक सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूको मात्र हो ।
Prevप्रेतआत्माले जीवित मान्छेहरुलाई दुःख दिँदो रहेछ- प्रचण्ड
मापसे गरेर वडाध्यक्षले अर्का वडाध्यक्ष कुटेपछि….Next